Golaha wasiiradda Soomaaliya oo magacaabay taliyaha NISA iyo taliyaha ciidanka booliiska - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGolaha wasiiradda Soomaaliya oo magacaabay taliyaha NISA iyo taliyaha ciidanka booliiska
February 19, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir guddoominayay kulanka. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa kulan maanta oo Isniin ah ay ku yeesheen Muqdisho ku magacaabay taliyaha haayada sirdoonka NISA iyo taliyaha ciidanka booliiska.
Cusmaan Shiikh Xuseen ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee haayada sirdoonka NISA, halka Janaraal Bashiir Cabdi Maxamed loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska.
Dabayaaqadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2017, golaha wasiiradda ayaa shaqada ka ceyrshay taliyihii booliiska Cabdixakiim Daahir Saacid iyo taliyihii NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalooshe kadib qaraxii gaariga ee ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 500 qof.
December 15, 2017 Mareykanka oo jaray qeyb kamid ah caawimaada uu siin jiray cutubyo katirsan milatariga Soomaaliya
January 15, 2017 Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Mareykanku tababaray oo weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland soldiers were reportedly killed in Al-Shabab attack in Galgala hills on Sunday. A security source told Puntland Mirror that two soldiers killed after fighters from Al-Shabab launched an attack on an army position in [...]